एउटा नेता दुई पदमा रहनुहुन्न : माओवादी केन्द्र प्रवक्ता पम्फा भुसाल
नेतृत्वका सन्दर्भमा सहमति खोजी गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटक—पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन नसक्दा एमाले—माओवादी केन्द्रबीच एकतामा कतै छेकवार त लागेको होइन भन्ने आसंका व्यक्त हुन थालेका छन् ।
एकीकृत पार्टीको नेतृत्व माओवादीलाई नदिने एमालेको अडान र अध्यक्ष पद नलिई एकतामै नजाने माओवादीको भनाईका कारण एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन् । बाहिर देखिएका यी घटनाक्रमको विपरित माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भने एकता भएरै छाड्ने दाबी गरेकी छिन् । यसै सन्दर्भमा प्रवक्ता भुसालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :-
एमाले—माओवादी केन्द्रबीच हुने पार्टी एकताका विषयमा बजारमा अनेकथरीका विश्लेषण सुरु भएका छन् । पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन ?
एकता प्रक्रिया ट¥यो, अब एकता हुदैन भन्ने बजारमा फैलिएका हल्लामा सल्यता छैन् । दुई दलबिचको इतिहास, वैचारिक मान्यतालगायतका विषयमा सहमति गरेर एकता गर्नुपर्ने भएकाले केहि ढिलाईं भएको छ । नयाँ सरकार निर्माण हुने बेलासम्म जसरी एकता घोषणा अप्रत्यासित रुपमा भएको थियो, त्यसैगरी एकता पनि हुन्छ, ढुक्क हुनुस् ।
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकअर्कोलाई गलाउने रणनीति अख्तियार गर्दा एकता प्रक्रियामा विलम्व भएको भनिन्छ नि ?
नयाँ सोच, नयाँ कार्यदिशा र नयाँ संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पार्टी एकता हुने हो । यी विषयलाई टुंग्याउन पार्टी एकता संयोजन समिति र दुई पार्टीका अध्यक्षबीच पनि निरन्तर गृहकार्य र छलफल भइरहेको छ ।
एकता प्रक्रियाले अझै छलफलकै माग गरिरहेको छ । त्यसैले केहि ढिलाई भएको भन्ने कुरामा केहि सत्यता छ । तर, दुई अध्यक्षले एकले अर्कोलाई गलाउन खोज्दा एकतामा ढिलाई भएको भन्ने कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन् । अफवाह फैलाउनका लागि विपक्षीले चर्चामा ल्याएका मात्रै हुन ।
नेतृत्वका विषयमा कुरा नमिल्दा पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच कुराकानी नभएको निकटस्थ नेताहरु बताउँछन् । कसरी मिल्छ नेतृत्वको भागवण्डा ?
दुई पार्टीलाई एउटा बनाउनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर सहमति खोजिनुपर्छ, अहिलेपनि त्यही भइरहेको छ । एकीकृत पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुई पार्टीका अध्यक्षहरुमध्य एउटाले अध्यक्ष, एउटाले प्रधानमन्त्री लिने की भन्ने विकल्पमा कुराकानी भइरहेको पनि सत्य हो ।
अहिले दुई पार्टीबीचको एकता आवश्यकता र हाम्रो एजेण्डा जनताले अनुमोदन गरेकोले अब हामी एकताबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन् । तसर्थ जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि एकता हुनैपर्छ । एकताकै गृहकार्यमा हामी लागिरहेका छौं ।
नेतृत्वको विषयमा कसरी मिलाउने तयारी भइरहेको छ ?
हामी सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । एमालेमा पनि त्यस्तै मतको बाहुल्यता छ । एकता सम्मानजनक हुनुपर्छ । माओवादी एमालेमा विलय हुने होइन । एमाले माओवादीमा विलय हुने पनि होइन । यो हामीले भन्दै आएको विषय हो । पछिल्ला समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि हाम्रो यो भनाईलाई स्वीकार्नु भएको जस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यसैले एक जना अध्यक्ष, एकजना प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने माओवादीले प्रस्ताव राख्दै आएको छ । ठूलो पार्टीको नेता हुनुको नाताले माओवादीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा माओवादी केन्द्रले स्वीकारी सकेको छ । आगामी दिनमा पनि माओवादीको प्रस्ताव यहि हो । तर, सहमतिका लागि कहाँ कहाँ मिलाउने भन्ने त बार्ताको टेवलमा बसेपछि थाहा हुन्छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको भनाई हो ?
स्वभाविक रुपमा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्न । पार्टीभित्र कार्यविभाजन हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर ओली पार्टी अध्यक्ष बन्ने सम्भावना त जिवितै छ । तैपनि ठुलो पार्टीको नेता भएकाले ओली नै प्रधानमन्त्री हुने र प्रचण्डलाई पार्टी चलाउन दिदा उपयुक्त हुने हाम्रो भनाई छ ।
सबैलाई सम्मानजनक कार्यविभाजन हुन्छ । एउटा पार्टी अर्को पार्टीमा गएर विलय हुने होइन । कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर केपी कमरेड अध्यक्ष पनि हुन सक्नुहुन्छ । अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्नुहोला । अहिले वार्ताका सिलसिलामै छौं ।
त्यसो भए अब, एकताको आधार के हो त ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पार्टी एकताको आधार माओवादी र एमाले दुवैको वैचारिक हो, हुनुपर्छ । सम्मानजनक कार्यविभाजन र संगठनात्मक संरचना बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । ओली र प्रचण्डमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टी अध्यक्ष हुनु नै स्वभाविक भएकाले एकताको अर्को आधार यो पनि हो ।
कहिलेसम्म हुन्छ त दुई पार्टीबीचको एकता ?
दुई पार्टी एक हुनका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्न बाँकी छन । ति कार्य पुरा गर्न चरणवद्ध रुपमा छलफल भइरहेको छ । एकता अघि गर्नुपर्ने अत्यावश्यक काम पुरा गरेर एकता गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकार निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । पार्टी एकता गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।
एकता प्रक्रिया जति ढिला ग¥यो त्यति विरोधीहरु खेल्ने मौका पाउँछन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर स्थायी सरकार बन्यो भनेमात्र मुलुकलाई विकास, समृद्धि र सुशासनको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ । अहिले हामीले हाम्रो ध्यान त्यही केन्द्रित गरिरहेका छौं ।
एकता विरुद्ध विभिन्न षडयन्त्र विरोधीले बुनिरहेको भन्नुभयो । के षडयन्त्र बुनिरहेका छन् भन्न मिल्छ ?
पार्टी एकता भयो भने कम्युनिष्टहरुले आफुहरुलाई कुनै अवसर र मौका नदिने भन्दै विरोधी राजनीतिक शक्तिहरु हाम्रो एकता भाड्नका लागि अनेक अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । मुलुकभित्रबाट मात्र होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि एकता भाड्नका लागि अनेक प्रकारका अत्कण्डा मच्चाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
पार्टी एकता नहुने, ओली र प्रचण्डबीच कुरा मिलेन भन्ने हिसावमा हौवा फैलाउने काम उनीहरुले नै गरिरहेका छन् । तसर्थ दुई पार्टीबीच एकता हुन नदिन विभिन्न षडयन्त्र भईरहेकोतर्फ एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वेलैमा सचेतना अपनाई बेलैमा उपयुक्त निर्णय लिनु उचित हुन्छ ।
केन्द्रमा सरकार गठन पहिला हुन्छ कि पार्टी एकता ?
दुबै विषय छिटै टुंग्याउन पर्ने छ । नयाँ जनादेश अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम आय लगत्तै ५ बर्षसम्म स्थायी रुपमा चल्न सक्ने सरकार बनाउनु छ । मुलुकमा कम्युनिष्टहरु मिल्दैछन् । उनीहरु मिलेर अघि बढेभने मात्र मुलुकको विकास हुन सक्छ भन्दै हामीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले मत दिएका हुन ।
त्यो मतको अपमान गर्न हुदैन । त्यसैले पार्टी एकता प्रक्रिया पनि छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउनु पर्छ । जनताको जनादेश पनि दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याएर एकिकृत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको दिशामा डोहो¥याउने म्याण्डेट छ । हामी सकभर दुबै कार्य एकैपटक गर्ने तयारीमा लागिरहेका छौ । कुन काम पहिला गर्ने र कुन काम त्यसपछि गर्ने भन्ने तत्कालिन आवस्यकतामा भर पर्ने कुरा हो ।
तर, एमाले नेताहरु त पहिला सरकार गठन भएपछि मात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढाइने बताउदै आएका छन् त ?
कुन सन्दर्भमा कुन नेताले बोल्नुभयो, त्यो फरक पाटो भयो । त्यसमाथि पनि नेतृत्वमा नरहेको एउटा नेताले व्यक्त गर्ने धारणा उसको नीजि विचार हुन्छ ।
अहिलेसम्म एमाले अधयक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिला सरकार बनाएपछि मात्रै पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर बोल्नु भएको छैन् । त्यसैले कसले के भन्यो भनेर उसको पछि लाग्नु भन्दा पनि कार्य फत्ते गरेर देखाउनु पर्छ । हामी त्यही अनुरुप अघि बढिरहेका छौं । न्यूज अभियानका लागि अभियान टाइम्सका साथमा ।